'Welcome back' - a reporter's fraught re-entry to Zimbabwe | National | journalnow.com
In this photo taken Sept. 13, 2019, Associated Press journalist Andrew Meldrum poses for a photograph at the entrance to State House in the capital Harare, Zimbabwe. After 16 years in journalistic exile, Meldrum returned to Zimbabwe, the country where he worked as a journalist for 23 years until he was expelled by former president Robert Mugabe's government. For the past week he reported on the mourning period for Mugabe.
FILE - In this May 16, 2003, file photo, journalist Andrew Meldrum is manhandled by police and pushed into a car after being issued with a "prohibited immigrant" order by immigration officials at their offices in Harare, Zimbabwe. After 16 years in journalistic exile, Meldrum returned to Zimbabwe, the country where he worked as a journalist for 23 years until he was expelled by former president Robert Mugabe's government.
FILE - In this Friday, Sept. 6, 2019, file photo, children play soccer next to a defaced portrait of former Zimbabwean president Robert Mugabe in Harare, Zimbabwe. After 16 years in journalistic exile, Andrew Meldrum returned to Zimbabwe, the country where he worked as a journalist for 23 years until he was expelled by Mugabe's government.
FILE - In this Sept. 11, 2019, file photo, a coffin carrying the remains of Zimbabwe's longtime ruler Robert Mugabe arrives from Singapore, at the Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare, Zimbabwe.
FILE - In this Sept. 7, 2019, file photo, an ice-cream vendor reads a newspaper reporting on the death of former Zimbabwean president Robert Mugabe on a street in Harare, Zimbabwe.
FILE - In this Sept. 14, 2019, file photo, the casket of former president Robert Mugabe is escorted by military officers as it departs after a state funeral at the National Sports Stadium in the capital Harare, Zimbabwe. After 16 years in journalistic exile, Andrew Meldrum returned to Zimbabwe, the country where he worked as a journalist for 23 years until he was expelled by Mugabe's government.
FILE - In this Sept. 14, 2019, file photo, women in the stands hold posters of former president Robert Mugabe at his state funeral at the National Sports Stadium in the capital Harare, Zimbabwe.
FILE - In this Sept. 13, 2019, file photo, people in the stands sing songs, one wearing a jacket with the face of former president Robert Mugabe and another waving the national flag, as members of the public queue up to view his body at the Rufaro stadium in the capital Harare, Zimbabwe.
FILE - In this Sept. 14, 2019, file photo, the casket of former president Robert Mugabe is loaded by military officers into a vehicle as it departs after a state funeral at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe.
FILE - In this, Aug. 7, 019 file photo, a woman walks home at sunset in the capital Harare, Zimbabwe.